नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष डा. भीम बहादुर रावलले दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनेर उठाएको माग सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।
आइतवार, अशोज १०, २०७८ ६:२३
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष डा. भीम बहादुर रावलले दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनेर उठाएको माग सम्बोधन गर्ने भएका छन् । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
अध्यक्ष ओलीले कति पनि विचलित नहुन र माग पूरा गर्न कटिबद्ध र प्रतिबद्ध रहेको बताएपछि भीम रावल खुसीले गदगद भएका हुन् ।